culture – Archives Nationales
MPIASAN’NY ARISIVAM-PIRENENA TENY AMIN’NY TOBIN’ALA ANGAVOKELY NY ZOMA 16 NOVAMBRA 2018
20 novembre 2018 culture, événement, loisir
Nitsidika ny Tobin’Ala (Centre National de Formation de Technicien Forestier) Angavokely ny mpiasan’ny Arisivam-Pirenena ny tontolo andron’ny Zoma 16 novambra 2018 lasa teo.
Zoma 16 novambra 2018
Lalana 36 km eo ho eo miatsinanana miala an’Antananarivo no misy ity Tobin’Ala ity izay manofana olona ho teknisianina amin’ny fikarakarana ala.
Mahatratra 696 ha ny velarany. Mampiavaka azy ny vatomainty (granite) sy ny orchidées ary ireo lava-bato manan-tantara.
Lava-bato (grotte) ao Angavokely
1752 metatra ny haavon’Angavokely ary 1755 metatra ny haavon’Angavobe.
Mbola misy an’Ambatomisondrotra ihany koa eny afaka tsidihina.
EVENEMENT EN COMMEMORATION DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE A ANKATSO LE 09 NOVEMBRE 2018
14 novembre 2018 culture, événement, histoire
Les festivités en commémoration de la Première Guerre mondiale (1914-1918) ont débuté en 2014 et se verront closes cette année 2018.
Dans la journée du Vendredi 09 novembre 2018, un événement mettant en exergue le vécu des tirailleurs malgaches pendant la Premiètre Guerre mondiale a marqué le Campus d’Antananarivo.
Avec la collaboration du Comité du Centenaire de la Première Guerre mondiale ainsi que du Département d’Histoire à Ankatso, la Direction des Archives Nationales a organisé une exposition sur ce thème à l’Université d’Antananarivo même.
Pour tout commencer ce jour, Mme RABEARIMANANA Lucile, historienne et professeur à l’Université d’Antananarivo, a donné une conférence traitant ce même objet. Juste après, le Général ANDRIAMISA-RAMIHAONA a donné un aperçu sur la politique publique mémorielle.
L’exposition a permis aux visiteurs de recueillir plus de données sur ce grand malheur qu’a connu la planète terre.
FAMPIRANTIANA 22 – 25 JONA 2018 TENY AMIN’NY TRANOMBOKIM-PIRENENA – ANOSY
27 juin 2018 culture, événement, histoire
Nandray anjara tamin’ny fampirantiana notontosaina teny amin’ny Tranombokim-Pirenena teny Anosy, ny Zoma 22 hatramin’ny Alatsinainy 25 jona 2018 lasa teo, ny Foiben’ny Arisivam-Pirenena.
Tonga nanome voninahitra ny fanokafana ny fampirantiana ireo solontenam-panjakana notarihin’ny Ministry ny Kolontsaina ankehitriny.
Tanjona niraisana teto Madagasikara, tany amin’ny taona 1960 tany, ny hitondra ny firenena malagasy ho amin’ny fandrosoana amin’ny lafiny rehetra. Niara-niasa hahatrarana izany ny fitondram-panjakana, ny olon-tsotra, ny orinasa, eny fa na dia ny vahiny aza.
“Vavolombelon’ny mpiasa ny bainga”. “Ny asa vita no ifampitsarana”. “Asa fa tsy kabary”. Marina ireo fitenenana rehetra ireo tamin’izany fotoana izany satria nanao rano lava sy tohy vakana ny fitsanganana fotodrafitr’asa lehibe nanerana ny Nosy. Niroborobo tao anatin’ny fotoana fohy ireo sehatr’asa efa nisy; nipoitra ho azy kosa ny mbola tsy nisy. Ireto misy santionany amin’izany:
orinasa maro mifamatotra amin’ny fambolena sy fiompiana,
orinasa misahana ny fitaterana,
orinasa sy toerana mitsinjo ny fahasalamam-bahoaka,
trano fianarana (oniversiten’Antananarivo),
lalana sy tetezana,
Tetezana « Philibert Tsiranana » ao Sofia notokanana ny 30 jona 1960
Hôpitaly ao Manakara notokanana ny 23 jolay 1964
Orinasa BATA notokanana ny 21 oktobra 1971
Efa hatrany amin’ny taona 1960 no niasa teto amin’ny firenena ny zandary sy ny tafika malagasy. Antom-pisian’izy ireo voalohany indrindra ny fisahanana ny filaminana. Miditra an-tsehatra amin’ny fampandrosoana ifotony ihany koa izy ireo amin’ny alalana tetik’asa mahakasika ny fambolena; ary manampy ny mponina amin’ny voina tampoka: manala ny hazo notapahin’ny rivo-doza, ….
Tafika manao andrana amin’ny fambolena amin’ny fomba moderina – taona 1977
Toy izany raha fintinina ny lohahevitra narantin’ny Arisivam-Pirenena nandritra ny efatra andro teny Anosy.
RAHARAHA TABATABA 29 MARTSA 1947, FENO 71 TAONA IZAO…
30 mars 2018 culture, événement, histoire
Nankalaza ny tsingerin-taonan’ny raharaha 29 martsa 1947 ny teto Madagasikara omaly Alakamisy 29 martsa 2018. Nomarihina tamin’ny hetsika efa fanao mahazatra teny Ambohijatovo, teny Mausolée, tany Moramanga io daty io ankoatr’ireo natao tamin’ny faritra samihafa manerana ny Nosy.
Zava-niseho anisan’ny tena nampihoron-koditra teto amin’ny firenena ny tabataba 1947. Mbola tsy maty ao am-pon’ny Malagasy maro ny hatezerana sy alahelo naterak’izany na dia efa feno 71 taona aza izao no nitrangany.
Voampanga ho nanafika sy nandoro ny toby miaramila tao Moramanga ary nanaparitaka fikomiana tamin’ny frantsay izay nanjanaka ny firenena ny antoko politika MDRM sy ireo nitovy fijery taminy ny alin’ny 29 martsa 1947 ka natao haza lambo. Nandà mafy hatramin’ny farany izany fiampangana izany nefa ireto farany. Teraka nanomboka teo ny fifanandrinana mahery vaika sy mahatsiravina ka teratany malagasy tsy hita isa (lehilahy, vehivavy, ankizy, zaza) no maty novonoina tamin’ny fomba feno habibiana isan-karazany. Nahafatesana maro ihany koa ny vazaha.
Malagasy maro no voaheloka ho faty, tsy vitsy koa ireo notanana am-ponja sy natao sesi-tany. Na lalam-by na arabe dia nahitana fahatapahana avokoa. Tanàna betsaka no may tao anantin’ny fotoana fohy monja. Nisy fahatapahana hatramin’ny fifandraisana an-tariby. Zary nanakorontana ny fiainam-piaraha-monina ny tahotra sy horohoro anaty nanjaka tao amin’ny rehetra, tsy nifampatoky intsony ny samy Malagasy.
Napetraka ny fitondrana miaramila (état de siège) tamin’ireo toerana noheverina ho faritra mena tamin’izany: Vohipeno, Manakara, Fianarantsoa, Ifanadiana, Mananjary, Nosy Varika, Mahanoro, Vatomandry, Moramanga ary Ambatondrazaka. Nalain’ny fanjakana (réquisition) ny fiarakely mpitatitra olona (taxi) niasa teto an-drenivohitra. Nofoanana ny tsena zoma teto Antananarivo mba hisakanana ny fifamezivezen’ny olona avy any ambanivohitra. Norarana ny varotra fitaovam-piadiana teto an-toerana.
Nivoaka ny 10 mey 1947 ny didim-panjakana nanafoana tanteraka ny antoko politika MDRM sy JINA ary PANAMA.
Didim-panjakana nandrava ny antoko politika malagasy MDRM, JINA, PANAMA
Gazetim-panjakana, Sabotsy 17 mey 1947, laharana 3229
TAOM-BAOVAO MALAGASY TAONA 2018
21 mars 2018 culture, événement, histoire
Raha ny marina dia samy manana ny taom-baovaony ny firenena tsirairay. Saron’ny fanatontoloana nihanahazo vahana tsikelikely ka zary nandrakotra izao tontolo izao nefa izany. Ny datin’ny 01 janoary no eken’ny daholobe ho voalohan’ny taona saingy tsy voatery hanaiky ny fahamarinan’izany akory ny rehetra.
Nisy àry ireo nanapa-kevitra fa tsy maintsy haverina ny fankalazana ny taom-baovao malagasy eto amin’ny tanin’ny Malagasy. Nanomboka ny hetsika tamin’ny Alakamisy 15 martsa 2018 lasa teo ary tsy hifarana raha tsy amin’ny Zoma 23 martsa 2018 ho avy izao.
Toy izao ny endriky ny fandaharam-potoana amin’izany:
– Alakamisy 15 martsa 2018: fampirantiana teo anoloan’ny Lapan’ny Tanànan’Antananarivo.
– Sabotsy 17 martsa 2018: hetsika isan-karazany teo anoloan’ny kianjaben’i Mahamasina narahin’ny fandrehetana ny afo tsy maty.
– Alahady 18 martsa 2018: fanentanana sy hira ary kabary fifampiarahabana tratry ny taona.
– Zoma 23 martsa 2018 (mbola ho avy): alin’ny taom-baovao malagasy ao amin’ny Akany Nambinintsoa Talatamaty izay hanasongadinana ny taovolo, ny fitafy, ny hira sy dihy, ny sakafo tena malagasy.
Mifanindran-dalana mandrakariva amin’ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ny fanatanterahana ireo fanaon’ny Malagasy fahiny amin’ny asaramanitra lehibe toy izao: tatao, harendrina, zara hasina, hira gasy,…
Tsy hifanerena ny fankalazana ny taom-baovao malagasy fa miankina amin’ny fandresen-dahatry ny tsirairay.
FIVOARAN’NY TRAIKEFA SY FAMPITAOVANA NY FOLOALINDAHY NANDRITRY NY 59 TAONA
Asaramanitra ankalazain’ny Malagasy isan-taona ny 26 jona, andro niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara tamin’ny fomba ofisialy. Faha 59 taona nitsingerenan’izany daty izany ity 2019 ity. Ho fanamarihana izany
Powered by WordPress | Theme Designed by: healthy seeds | Thanks to pain management, cbd and cbd vape